Izibonelelo zekofu: zonke iimfihlelo zodade wakho wasekuseni | Amadoda aQinisekileyo
Yinto yakudala yokuhamba kusasa, kodwa uyazazi zonke izibonelelo zekofu? Sinokusela ntoni esi siselo, kwimpilo yakho ngaphezu kweekhemikhali ezingaphezulu kwe-1000 ezahlukeneyo?
Masibone ukuba yeyiphi ifuthe lokusetyenziswa kwekofu rhoqo emzimbeni. Ukuba ungomnye wabalandeli abaninzi abanesi siselo kwihlabathi liphela, ngokuqinisekileyo uya kuyifumana inomdla kakhulu.
1 Izizathu zokusela ikofu
1.3 Isifo sentliziyo kunye nesibindi
1.4 Imikhwa eyingozi empilweni
1.8 Izibonelelo ezininzi zekofu
Izizathu zokusela ikofu
Ngenxa yokuthandwa kwayo, ayothusi into yokuba ikofu ibisoloko isenziwa kuphando olunzulu.. Izinto ezifunyenwe zizazinzulu zinokukothusa, kuba izigqibo zezinye zezi zifundo zibonisa ukuba ikofu ayisebenzi nje njengesikhuthazi (into enokusetyenziswa kakhulu, hayi kusasa kuphela) thintela izifo ezininzi.
Enye yeemfihlo zezibonelelo ezinokubakho zekofu iya kuba kukukwazi kwayo ukulwa radicals simahla, ezingena emzimbeni wakho ngokutya okuthile, kunye naxa imitha yelanga idibana nolusu lwakho. Ngamafutshane, akukho kuphuncuka. Kodwa, ngethamsanqa, ikofu yenye yeendlela zokutya ezinokukunceda kulo mbandela ubalulekileyo.
Kwaye sesokuba isiselo esixhalabisayo kwesi sihlandlo sikunika ii-antioxidants ezigcina ii-radicals simahla, zibathintele ekufumaneni indlela yabo kwaye baphele ngokonakalisa iiseli zomzimba wakho, ezikhokelela kuphuhliso lwezifo, into ngokwendalo akukho mntu ufuna. Nangona kunjalo, ubudlelwane beziphumo abukabikho Kungenzeka ukuba ezi zibonelelo zibangelwa zizinto ezingezizo ezekofu.
Uphando lubonisa ukuba abantu abasela ikofu abanakufane baphuhlise uhlobo lwesifo seswekile. Kubonakala ngathi kukho i-antioxidant kwikofu enceda ukugcina iswekile yegazi isezantsi kwaye izinzile.
Isifo sikaParkinson sisifo esibi kakhulu, esithi, emva kokuhlasela iiseli zemithambo-luvo yengqondo, sithintele isigulana ekuhambeni ngendlela eqhelekileyo. Kukho izifundo ezinxibelelanisa ikofu kunye noncedo lweempawu zokuqala zikaParkinson. Olunye uphando luya phambili, lubonisa ukuba ikofu iyanceda ukuthintela ukukhula kwesi sifo.
Isifo sentliziyo kunye nesibindi
Ubudlelwane phakathi kwe-caffeine kunye nentliziyo bunzima. Enye into, kubonakala ngathi iyingozi kubantu abanesifo sentliziyo. Endaweni yokuba olunye uphando lubonise ukuba kunokubanceda. Izibonelelo zekofu yentliziyo zibangelwa yinto yokuba Unceda ukunciphisa umngcipheko wokwakha i-plaque kwimithambo, ehambisa igazi entliziyweni.
Kuya kumangalisa ukuba ikofu ilungile kwisibindi nayo, akunjalo? Ewe, abanye bathi, enyanisweni, kunjalo. Ukuba ungomnye wabo bangalahli ngaphantsi kweekomityi ezintathu ngosuku, uphando oluthile lunikezela ngokuzenzekelayo amathuba okuba nesifo sesibindi, isifo sokuqina kwesibindi kunye nomhlaza wesibindi. Ezi ziindaba ezilungileyo, njengoko lo mzimba ubaluleke kakhulu.
Imikhwa eyingozi empilweni
Jonga eli nqaku: Izinto ezichaphazela impilo. Apho uyakufumana imikhwa yemihla ngemihla ekufuneka uyiphephe ukunceda umzimba wakho ukuthintela izifo kwaye uhlale ukwimo ephezulu ixesha elide.
IStrowuku senzeka xa igazi lingenakungena kwindawo ethile yengqondo. Sela ikomityi yekofu yemihla ngemihla inokuwunciphisa umngcipheko wokubetha ngenxa yezibonelelo ezinokubakho zokudumba kunye namanqanaba eswekile yegazi. Esinye isiselo esinomdla kakhulu sokunciphisa umngcipheko wokubetha yiti emnyama. Kule meko, kuba iya kunciphisa uxinzelelo lwegazi, oluthi, xa luphezulu kakhulu, lube yinto yomngcipheko.
Zininzi iindlela zokutya ezinokunceda ukuthintela umhlaza. Yinto eyaziwayo njenge ukutya kwe-anticancer. Ewe, ikofu ihlala ifakiwe phakathi kwabo. ngenxa yobutyebi bayo kwii-antioxidants.
Esi sifo, esibangela ukulahleka kwememori kunye neengxaki zokuziphatha, phakathi kwezinye iimpawu, okwangoku sisifundo kwizifundo ezininzi kuba kukho izigidi zamatyala kwihlabathi liphela. Kukho iziphumo ezithembisayo kakhulu, kodwa ngelishwa akukho nyango lufunyenweyo ukuza kuthi ga ngoku. Esinye sezi ziphumo ezenza ukuba ungalahli ithemba sinxulumene nekofu. Kuyabonakala ukuba, esi siselo sinceda ukukhusela ii-neurons, kwakhona, kwii-antioxidants.
Izibonelelo ezininzi zekofu
Thintela isifo sengqondo esixhalabisayo
Ukunciphisa umngcipheko wamatye e-gallbladder
Kwelinye icala, ikofu inokuba neengxaki. Ukusetyenziswa gwenxa kwecaffeine kungakhokelela kuxinzelelo kunye nokucaphuka, kunye nengxaki yokulala kakuhle. Inokuphazamisa nokufunxwa kwecalcium.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Kufanelekile » Izibonelelo zekofu
Ungayicofa njani i-abs